Ubuntu 18.04 ishiywe yodwa ekuxhaseni. Iincasa ziphulukana nayo sele | Ubunlog
Ubuntu 18.04 ifikelela esiphelweni sobomi bayo, ngaphandle kokuba usebenzisa olona hlobo lukhulu
IPablinux | | Kubuntu, Lubuntu, Ubuntu, Xubuntu
Ngaphezulu kweminyaka emithathu eyadlulayo, iCanonical yasungula usapho I-Bionic Beaver yenkqubo yakho yokusebenza. Ifike ngo-Epreli 2018, ke eyona nguqulelo iphambili yabizwa Ubuntu 18.04 kunye nezinye iincasa zongeze amanani afanayo kumagama abo. Njengokukhutshwa kuka-Epreli weminyaka engafakwanga kubalwa, le yayiyinguqulelo yeLTS, oko kuthetha ukuba baxhaswa ixesha elide, kodwa ayizizo zonke iincasa ezixhaswa iminyaka emihlanu.
Iminyaka emihlanu yenkxaso yenzelwe kuphela uguqulelo oluphambili, Oko kukuthi, leyo isebenzisa i-GNOME kunye negama nguBuntu nje. Bonke abanye, uKubuntu, uLubuntu, Xubuntu, Ubuntu MATE, Ubuntu Budgie, Ubuntu Studio kunye no-Ubuntu Kylin baxhaswe iminyaka emithathu, ke, sele bekho ngoMeyi 2021, bafikile Ukuphela komjikelo wobomi bayo. Uhlaziyo lokugqibela lolondolozo kubo yayingu 18.04.5, ka-Agasti 2020, kodwa baqhubeka nokufumana iipakeji ezintsha kunye neepatches kude kube ngu-Epreli 30 odlulileyo.
Ubuntu 18.04 iya kuqhubeka nokuxhaswa. Bonke abanye kuya kufuneka bahlaziye
Abasebenzisi abasasebenzisa incasa ye-Ubuntu 18.04 Bionic Beaver kufuneka bahlaziye ngoku. Ngokwam, ndingacebisa ukuba usekele iifayile zakho ezibalulekileyo kwaye yenza ufakelo ekuqaleni, kuba kusenokwenzeka ukuba umntu othile asebenzise uguqulelo olunama-32-bit, engasasaxhaswa, kwaye kukho ezinye iincasa eziye zatshintsha imeko yemizobo, enje nge-Ubuntu Studio, eyaqhubeka isebenzisa i-KDE Plasma, kunye neLubuntu, eya ukuya kwi-LXQt.
Ngokumalunga neyiphi inguqulelo yokufaka, ukuba bekusetyenziswa i-LTS, into esengqiqweni kukucinga ukuba enye Inkxaso yeXesha elide ikhethwayo, ke ukutsiba kuya kuba kwiFocal Fossa (20.04). Ukuba uthatha isigqibo sokusebenzisa olona hlaziyo luhlaziyiweyo, yiyo 21.04 efike nje kwiiveki ezimbini ezidlulileyo. Ukusuka apho bendingazukuyilayisha ivela ku-Ubuntu 18.04, eyona nguqulelo iphambili, kuba iHirsute Hippo ibonakala ngathi yinguqu yotshintsho kunesiqhelo, kodwa Ubuntu buya kuqhubeka nokonwabela inkxaso kangangeminyaka emibini. Khetha oko ukhetha, kunyanzelekile hlaziya ngoku.
Umendo opheleleyo kwinqaku: Ubunlog » Ulwabiwo olusekwe kubuntu » Kubuntu » Ubuntu 18.04 ifikelela esiphelweni sobomi bayo, ngaphandle kokuba usebenzisa olona hlobo lukhulu
Inguqulelo yesithathu yophuhliso lwe-GIMP 3.0 sele ikhutshiwe
I-Pingus, umdlalo we-Lemmings-style ukuze ube nexesha elihle